Ukutshabalalisa inxalenye yendlela yokukhusela yomzimba wezilwanyana, ngenxa yokuba inja inethuba lokukhupha isisu sokungaphezu kwamanzi, ukutya, umkhiqizo othile owonakalisiweyo okanye ongafanelanga, ngaphambi kokudlulela kwinkqubo yokutya kunye nokulimala. Ukuba inja ihlanza rhoqo kwaye iqhubeke, ingakumbi ukuba umhlanzi uqulethe igazi, ngoko inja yakho ifuna ukunakekelwa kwezilwanyana ngokukhawuleza. Kukho iintlobo ezintathu zokuhlanza, esithetha ngazo ngoku.
Ukuba inja iqhuma kwaye ilula, ngoko akusiyo impawu yesifo esithile.
Ngenxa yokugula okunjalo, isilwanyana sinciphisa izihlunu zesifuba okanye isithsaba, isisu esiswini ukuze kukhishwe yonke into equle kwisisu.
Ukuchithwa kwamanzi (ukulahleka kwamanzi emzimbeni) yingozi enkulu yokuhlanza okuqhubekayo kunye nokuphindaphindiweyo, kuba umthamo wegazi ojikelezayo uqala ukunciphisa ukuze inja ifike ngokukhawuleza. Indlela yokuchonga ukuba inja idibene okanye ayikho? Ukwenza oku, kufuneka uphakamise i-fold in the back kwaye ubambe nge-index finger yakho kunye nesithupha. Ukuba isalathisi ayilungiswanga, xa usivumela ukuba sihambe, ngoko isilwanyana asinayo i-liquid eyaneleyo emzimbeni.
Ukuba inja iyahlanza, ke akukho mzekelo kufuneka unikezwe ngamanzi abandayo, kuba ngale ndlela ungaqhubeka nokuhlanza, kodwa awukwazi ukushiya inja ngaphandle kwamanzi ngokupheleleyo, inokuba yingozi. Kungcono ukumnika amanzi ngobuncinane ubuncinane kwisiqingatha seyure.
Ukuba inja ihlala ide kwaye ikhula ngokukhawuleza, mhlawumbi isisombululo siya kuba luncedo: enye i-spoonful egcweleyo ye-glucose enye ye-pint yamanzi abilisiwe. Esi sixazululo kufuneka sinike isilwanyana ngamanani amancinci ukuze ibuyisele amandla ayo kwaye ayifuni amandla. Indlela enjalo uncedo lokuqala xa kwenzeka ukuba uyithathe inja kumgqirha wezilwanyana, umbizele endlwini okanye ngandlela-thile uxhumane naye ukubonisana.
Ukuba umhlanzi uqulethe iindlala zokutya, ngoko kuya kuba kuhle ukuba ufumanisa ukuba ixesha elide sele lihlala sisesiswini. Kakhulu, umntu kufuneka aqwalasele ubukho bezinto ezincinci zokutya kunye nesincinci se-foamy saliva okanye amanzi amaninzi inja ephuzayo, kunye ne-pancreatic juice kunye ne-bile . Khumbula xa wanika inja amanzi kunye naluphi ubungakanani. Bhala phantsi ixesha elide ukuhlanza kuphelile.
Kukho uhlobo olunjalo lokuhlanza njengento yokuhlaziya. Eli nyathelo alisebenzisayo kwaye lisetyenziswe ngumzimba ukwenzela ukutshiza iziqwenga zokutya endikudla inja. Ukuba uthe udla ukutya othe wadla kutshanje, mhlawumbi isilwanyana sisidla ngokukhawuleza yonke into. Oku kubonwa njengento eqhelekileyo kwizinja ezithile, ngakumbi xa zikhuphisana nezinye izilwanyana ukugwinya ukutya ngaphandle kokuhlafuna okanye xa ziphoqelelwe ukuba zidle into ethile ngelixa bengalambi.
Okuqhelekileyo yinto ebonakalayo xa inja igqeba ukutya okutyongwe ngokukodwa ukunyusa amantombazana ayo xa bengasasazi i-sosmoloko.
Ukuba iimbongolo ezindala okanye izinja ezindala zivuselela, le nto inokuba ngumphumo wesifo sokuzalwa okanye ukukhutshwa, ngoko ukuba uyaphawula ukuba oku akuyona nje imeko eqhelekileyo, ngoko nangoko qha ga mshelana nodokotela wakho wezilwanyana.
Kufuneka uqaphele ukuba inja ibuye ibuyele ngaphaya komlinganiselo wokutya okunjani, kwaye kufuneka kuphawulwe, emva kwexesha elithile emva kokuthatha ukutya kwaqala ukuhlaziya.
Uhlobo lwesithathu lokuhlanza lunqwenela ukuhlanza - ukungcola okungazibandakanyeki, okungahamba kunye nokukhwehlela, kodwa kungekho rhoqo. Oku kungabangela ubunzima bokugwinya ukutya, ngoko inja, kunye ne-saliva, izama ukuthumela ukutya ngokukhawuleza. Kungenzeka ukuba isilwanyana sinento ephazamisa umlomo womlomo okanye i-pharynx, kwaye isikhuthazo sinokudityaniswa nomqala wesifo kunye nokukhwehlela komcimbi. Ukuba loo minqweno iqhubeka rhoqo kwaye ihlala ikhona, kufuneka udibane nodokotela wezilwanyana.
Injongo yalo mhlanza
Inja ingakwazi ukuhlanza ngenxa yeemeko ezininzi kunye nezifo ezinzulu, ingakumbi zibandakanya i-endometritis engenazilwanyana kwiintlanzi, isifo sesifo, isifo se-kidney, esiswini esiswini kunye ne-parvoviral enteritis. Ukuba inja igula kakhulu, ngoko i-pomimoroty isondlo sayo siya kuhamba kwaye i-diarrhea iza kuqala. Ukuba ubona ukuba inja yakho inesimo esifanayo, kufuneka uncede ngokukhawuleza ukubonelela ngesilwanyana ngononophelo lwezilwanyana, ngokukodwa awukwazi ukutsala xa ubona ukuba izihlunu ezihlanzazi ziphethe igazi.
Ukutshabalalisa kunokwenzeka xa inja idlile imveliso ephangaleleyo, i-carrion, izinto ezinobuthi, kunye nezinto ezizityalo ezenziwe ngetyhefu okanye ukutya okungafanelekanga, zicasula amathumbu nesisu. Ukuba ukuhlanza kubangelwa zizizathu ezinjalo, ukuhlanza inja kuya kuvuza emlonyeni we-saliva, kwaye ummandla wesisu uza kuphazamisa. Kwiimeko ezinjalo, kwakhona, kufuneka uncedo oluphuthumayo lugqirha wezilwanyana.
Ukuba uyazi ukuba kutheni inja yakho iyayidla, yintoni uhlobo lwesidlo esidlile, umzekelo, ubuthi bezonyango, uze uye nesilwanyana kwizilwanyana zezilwanyana uze uqiniseke ukuba uthatha ipakethe yexabiso. Kungenxa yokuba ukuba ugqirha uyazi ukuba yintoni uhlobo lweemichiza ezisekwe esiswini senja, oko kuya kuba lula kuye ukuba afune ukuba yeyiphi i-antidote efunekayo.
Ngokuqhelekileyo, imbangela yokuhlanza inja kukuvimbela intlungu, ngokukodwa malunga neentsana. Mhlawumbi kwindlela yokugaya inyama ixhambile amatye, amathambo, amathoyizi amancinci okanye ezinye izifundo. Kule meko, inja iya kudlaleka, kwaye imeko yayo iya kuba yingozi. Ukuba ucinga ukuba isilwanyana sakho sidle into engadliyo, mthabathe ugqirha, mhlawumbi inja iya kuyidinga ukuhlinzwa ngokukhawuleza, kwaye kungcono ukwenza oku xa inja ingena emzimbeni kwaye iphelile ekuhlanjeni.
Umthombo wamanzi- ukuchaza uhlobo olukhethekileyo lokuhlanza, xa ukutya okutshatyalaliswa kutshanje kuphuma inja ngamandla, ngamanye amaxesha umgama wamanyathelo athile. Ngokuqhelekileyo, kunokuthi kwenzeke kunye neentsana ezineminyaka eyi-6 ukuya kwi-16. Oku kungenxa yokuba inja ayikwazi ukukhuthaza ukutya ukusuka esiswini ukuya emathunjini. Uncedo lwezilwanyana kulesi sizathu luyimfuneko, kuba utyando olufanelekileyo lunokuba luyimfuneko.
Kule meko, kufuneka uqikelele intsuku zonke iintsuku ukuze ubone ukuba akayi kulahlekelwa ngumzimba.
Izinja, kunye nabantu, zingahlanza endleleni. Amantombazana amaninzi ehlathini ahlanza, ahlanza aze anike umlenze. Mhlawumbi oku kungenxa yokuxinezeleka, ukuba intshontsho yokuqala ishiye ikhaya okanye ngenxa yesifo se-vestibular disorder.
Ukuba uhamba ne-puppy emotweni, kuya kuba ngcono kuye xa ubambelela ngokusemthethweni okanye wambeka kwisikwerelo somnxeba wocingo kwaye uyigubungela nge-cotton. Ngaphezu koko, ukuba uya kuthatha inja kwindawo ethile, ngoko kufuneka wenze oku, kwaye ngendlela ongayenza ngayo intshontsho ngobuncwane njengomvuzo, kuhle ukuyeka nokuhamba isilwanyana esincinane. Ngombulelo kwiinkalo ezincinci, inja isoloko iyinqoba imeko yayo embi endleleni. Ngokuqinisekileyo, inketho efanelekileyo yenja kukutshintshwa ukuhamba emotweni kuze kube seminyaka yeeveki eziyi-8, kuba ngaphambi kwalo xesha inkunzi ayinayo "ixesha lokwesaba".
Ukuba isilwanyana asikwazi ukulungelelanisa ukuhamba, kungcono ukuba ungayithuthuli, kodwa ukuva ubuncinane uze usebenzise iindlela ezichazwe ngasentla. Musa ukunika izinja imishanguzo eyenzelwe ukulwa nokugula kokuhamba endleleni endleleni yabantu. Kwizilwanyana unokuthabatha amayeza aphuhliswe ngokukhethekileyo kwizinja, kwaye uya kukuxelela indlela yokuyithatha ngokufanelekileyo.
Ukuba inja izama ukuhlutha, kodwa ayisebenzi, khumbula ukuba kunokuba nemiphumo emibi kakhulu, ngoko qi niqiniseke ukuba ucele uncedo olufanelekileyo kwingcali.
Ngamanye amaxesha unokwazi ukuba inja izama ukuhlanza, kodwa akukho ukutya okushiya i-zzhezludka. Ukuba isilwanyana siphawuleza sisithukuthele esiswini, ngoko inja yakho isesichengeni kwaye ifuna ngokukhawuleza uncedo lugqirha wezilwanyana.
Iimfihlelo zokwenza i-massage ebomini
Iimpawu ze-massage ye-soap massage
Umqulu wenkomo waseNapolitan
Indlela yokwenza i-eyeliner ngokuchanekileyo?
Isaladi ye-Strawberry nge sipinashi
Ziziphi iintlobo zokusela utywala akufanele zidideke: Isexwayiso, inobungozi kwimpilo!
I-Saladi kunye ne-tuna kunye ne-avocado
Indlela yokwandisa ukukhangela ngesondo kumyeni wakhe